समाजवादका लागि निस्वार्थ एकता गरेका हौ, भागवण्डाको स्वार्थ छैन: गणेश साह – Everest Dainik
समाजवादका लागि निस्वार्थ एकता गरेका हौ, भागवण्डाको स्वार्थ छैन: गणेश साह
वाम एकताको प्रक्रिया सुरु भएपछि नेकपा संयुक्त तुरुन्तै नेकपा माओवादी केन्द्रमा मिसियो । रुस सर्मथित मानिने नेकपा संयुक्त र चीन सर्मथित मानिने माओवादी केन्द्रको विना शर्त पार्टी एकता किँन र के का लागि ? अनेकन आँकलन गर्न सकिन्छ तर शन्तिपुर्ण राजनीतिक संघर्ष र जनयुद्धबाट आएको पार्टीबीचको एकता निक्कै सहज देखिनु पनि अप्रत्याशित नै लाग्न सक्छ । ऐभरेष्टदैनिकका लागि रघुनाथ बजगाँईले नेकपा संयुक्तका तत्कालिन अध्यक्ष गणेश शाहसंग लिएको अन्तरवार्ता:
तपाईहरुको पार्टी एकताको सन्देश के हो ?
मुलुकमा राजनीतिक ध्रुविकरण सुरु भएको तपाईलाई थाहै छ । यो सकारात्मक मात्र होईन राजनीतिक स्थायीत्वको आधार पनि हो । हामीले २०४६ सालकै चुनावमा मोर्चा बनाएर एक वाम एक ठाम भनेका थियौ। अहिले आएर ठूला पार्टीहरुले यसलाई आत्मसाथ गरे । यसर्थ वाम एकता अभियानलाई अगाडी बढाउनु दाईत्व ठान्यौँ ।
अब जसले जिते पनि वामपन्थीले जित्ने हो । तलाई र मलाई भन्नै परेन । चुनाव जित्न सक्ने र योग्यलाई उम्मेदवार बनाईन्छ । कुनै सर्त नराखी एकता गरेका हौँ ।
दोस्रो आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि पार्टी एकता हो । नेपालमा सात दशकदेखि भएका राजनीतिक उथलपुथलसंगै आर्थिक क्षेत्र ध्वस्त भए । बेरोजगारीको समस्या विकराल छदै‌छ । जनताले राज्य भएको अनुभुत गर्न पाएका छैनन् । यसको प्रमुख कारक भनेको राजनीतिक स्थिरता नै हो । अब वाम गठबन्धन भएपछि कम्तीमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आउँछ र अल्पविशित मुलुकबाट विकशित मुलुक बन्नेतर्फ जान सहज हुन्छ । सामाजिक सद्ध्भावको बिषय पनि छ । धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलब्धीको सहि कार्यान्वयन गर्नु छ ।
सम्बन्धित् समाचार अन्तरमुखी ओली, बहिर्मुखी प्रचण्ड
तेस्रो कम्युनिष्ट आन्दोलनकै रक्षा पनि हो । विश्वमै कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै गएका बेला हामीपनि साना साना समुहमा विभाजित भैरहँदा हाम्रो समाजवादको मिसन पुरा हुन सक्तैन ।
उनीहरुले भनेको नौलो जनवाद र हामीले भनेको राष्ट्रिय जनवादको लक्ष्य वा सार एकै हो । हामीले पञ्चायत कालमै राष्ट्रिय जनवाद भनेका हौँ । अहिले परिवेश फेरिएको छ । नौलो जनवाद भन्न के अप्ठेरो पर्यो र ?
तपाँईको पार्टीले एकताका लागि माओवादी केन्द्र नै किँन रोज्यो ?
म त भन्छु दुई वामपन्थी धारका पार्टीहरुको पहिलो एकता हामीले गरेका छौँ । माओवादी केन्द्र जनयुद्धबाट आएको पार्टी हो । उसले उग्रवामपन्थीधारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । तर तत्कालिन नेकपा माओवादी होईन । हामी शन्तिपुर्ण अन्दोलनबाट सम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्दै आएका हौँ । रुसी क्रान्ती भन्नुस वा चीनमा माओले गरेको क्रान्ती । समयानुकुल परिमार्जन हुनु पर्दो रहेछ भन्ने त बुझन सकिन्छ नी । हामीले पनि त्यहि गर्यौँ ।
नेपालले अब आफ्नो परराष्ट्रनीति परिमार्जन गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्नुपर्छ । चाईना र इन्डियन कार्ड खेलेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने त बुझ्नुपर्यो ।
यसले कार्यदिशामा अप्ठेरो पादैन ?
सम्बन्धित् समाचार विधि पनि नमान्ने, सहमति पनि नगर्ने एमालेकै कारण गतिरोध लम्बियो-खनाल
पार्दैन, उनीहरुले भनेको नौलो जनवाद र हामीले भनेको राष्ट्रिय जनवादको लक्ष्य वा सार एकै हो । हामीले पञ्चायत कालमै राष्ट्रिय जनवाद भनेका हौँ । अहिले परिवेश फेरिएको छ । नौलो जनवाद भन्न के अप्ठेरो पर्यो र ? राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिस्तरमै समाजवादलाई स्थापीत गराउने उदेश्यसहित सुरु भएको वाम एकतामा हामी रोकीएर भो ! हेर्नुस चीन विश्वकै शक्तिशालि र धनि देश बन्दैछ । भारत उस्तैगरि अगाडी बढिरहेको छ । नेपालले अब आफ्नो परराष्ट्रनीति परिमार्जन गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्नुपर्छ । चाईना र इन्डियन कार्ड खेलेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने त बुझ्नुपर्यो । यसर्थ आर्थिक समृद्धि सहितको समाजवादकै लागि लड्ने वामपन्थी दलहरुकाबीचमा एकता भैसकेपछि कार्यदिशामा मतान्तर रहँदैन ।
आउँदो चुनावमा माओवादी केन्द्रले कति सिट दिन्छु भनेको छ ? संरचनागत बिषय पनि होलान..
अब जसले जिते पनि वामपन्थीले जित्ने हो । तलाँई र मलाई भन्नै परेन । चुनाव जित्न सक्ने र योग्यलाई उम्मेदवार बनाईन्छ । कुनै सर्त नराखी एकता गरेका हौँ । वाम गठबन्धनको घोषणा संगै माओवादी केन्द्र पनि विघटन भैगो । संरचनागत बिषयमा सल्लाह गरेर समायोजना गरिन्छ । काखा र पाखा गरिन्न ।
सम्बन्धित् समाचार कैलालीमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट लेखराज भट्ट लगायतको मनोनय दर्ता
ट्याग्स: ganes shaha, Left Unity, raghunath bajagain, गणेश शाह